Office :: Office Tables & Desks :: Cash Handling Supplies :: [SHARP] Cash Registers xe-a147
Home/Office/Office Tables & Desks/Cash Handling Supplies/[SHARP] Cash Registers xe-a147
Minimum quantity for "[SHARP] Cash Registers xe-a147" is 1.
Automatic tax (VAT) calculation (4 VAT rates)
Help key for fast printing of set-up and operating instructions
One SD card slot, One RS-232 port*1 (1 x 9-pin D-sub)
Battery option (XE-A1BT)*2
Runs 8 hours*3
*1 Only for European fiscal control unit
*2 Ni-MH rechargeable battery. XE-A147-WH/BK only
*3 Conditions: 70 transactions/day,4items/sale, 19-line printing/transaction, new battery, fully-charged, operating temperature 25°C
Recharge time: approx. 12 hours max. (recharged in OFF mode)
Sharp ငွေသိမ်းစက်ပါ။ အကန့်သေး၊ အကန့်ကြီး စုစုပေါင်း ၉ ခုထိပါဝင်ပြီး အခွန်ကို အလိုအလျောက်တွက်ပေးမယ့်စနစ်လည်းပါဝင်ပါတယ်။ Built-in SD card ပါပြီးသားမို့လို့ data transfer နှင့်programme backup လုပ်ရတာ ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။LED display လည်းပါလို့ လွယ်လွယ်ကူကူ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အဖြူ၊ အမည်း နှစ်ရောင် ရနိုင်ပြီး ၁၀၀ % ပစ္စည်း စစ်ကြောင်းအာမခံပါတယ်။ အိမ်ရောက်ငွေချေစနစ် နှင့်လည်းဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Sharp ငှသေိမျးစကျပါ။ အကနျ့သေး၊ အကနျ့ကွီး စုစုပေါငျး ၉ ခုထိပါဝငျပွီး အခှနျကို အလိုအလြောကျတှကျပေးမယျ့စနဈလညျးပါဝငျပါတယျ။ Built-in SD card ပါပွီးသားမို့လို့ data transfer နှငျ့programme backup လုပျရတာ ပိုအဆငျပွပေါတယျ။LED display လညျးပါလို့ လှယျလှယျကူကူ ကွညျ့နိုငျပါတယျ။ အဖွူ၊ အမညျး နှဈရောငျ ရနိုငျပွီး ၁၀၀ % ပစ်စညျး စဈကွောငျးအာမခံပါတယျ။ အိမျရောကျငှခေစြေနဈ နှငျ့လညျးဝယျယူနိုငျပါတယျ။